Etu esi achọta ọdịnaya abụọ
Offọdụ ndị ọrụ ibe m enwetala ezigbo nsonaazụ dị mma na ịzụta ọdịnaya iji bido saịtị, iji nye ozi ederede akọwapụtara, ma ọ bụ ọbụna iji zụọ mmemme ghostblogging na-aga n'ihu. Iwuli ọdịnaya di elu nwere ike ịbụ ihe ịma aka, yabụ ọtụtụ ọrụ amalitela iji nyere ụlọ ọrụ aka iwu ọbá akwụkwọ ọdịnaya ha.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịga ọnụ ala ma ọ bụ zụta ọtụtụ isiokwu na nnukwu, ị nwere ike ibute ihe ize ndụ nke ịzụta ọdịnaya nke ejiri ntọala sitere na ebe ọzọ na weebụ. Textbroker bụ ọrụ dị ọnụ ala nke na-enye ọdịnaya. Izu a ha bidoro UN.COV.ER, ngwa n’efu maka inyocha na ọdịnaya gị dị iche.
UNCO.VER nwere ike iji ọtụtụ ụzọ dị iche iche:
Iji aka abanye ederede (idetuo & mado)
Otu weebụsaịtị, tinyere ngalaba na sub-domains
N'ezie, ị nwere ike ịlele otu ọrụ Weebụ maka oyiri:
Ihe nyocha anyi puru iche nwere ihe ichoro nke n’emeputa saiti ihe omuma intaneti gi dum na ihe edere ede. Mgbe ahụ UN.CO.VER na-eji aka atụnyere nke ọ bụla n’ederede ndị a na nde peeji ma na-akọ n’azụ na ọtụtụ data, gụnyere ọnụọgụgụ nke okwu depụtaghachiri na otu mkpụrụokwu e depụtaghachiri. Ọrụ autostart nke ugbu a na-enye gị nchebe zuru oke na-ebulighị mkpịsị aka. Mgbe Windows bidoro, ya mere UN.COV.ER, na-ahụ na a na-enyocha ọdịnaya gị maka oyiri kwa ụbọchị.
Y’oburu na gi na ndi ozo n’enye oru, ngwa oru a nwere ike buru ego gi. Ihe ikpeazu ichoro bu ka eme ka amata saiti gi dika saiti ma obu webata gi maka ibiputa ihe echedoro.
Tags: nkwuputagoogle searchNsonaazụ ọchụchọule weebụ